राती भयो कि कोहि आएर अनुहारमा मुक्कै मुक्काले हान्छ - Khoj Sanchar
२७ वर्षका एक जना विरामीलाई उनकी आमा र काकीले लिएर जचाउन ल्याउनु भएको थियो । विरामीको समस्या थियो “राती भयो कि कोहि आएर वहाँको अनुहारमा मुक्कै मुक्काले हान्छ, वहाँले आफ्नो अनुहार भरी नै निल डाम र घाँउ देखाउँदै भन्नु भयो, यो सवै वक्सिङ हानेर भएको घाउँहरु हो” ।
कसले त्यसरी वक्सीङ हान्छ त तपाईलाई भनेर सोध्दा वहाँले कसैलाई देख्नु हुन्न रे तर वक्सीङ लागेर वहाँ यो कुनावाट त्यो कुना र त्यो कुनावाट यो कुना गर्दै कोठामा रन्थनाउनु हुन्छ रे, तर कसले हान्छ देख्नु भने हुन्न ।
विरामीको प्रकृती अलि अनौठो नै थियो र फेरी अनुहार भरी निलडामहरु पनि थिए । विरामीको आमालाई सोध्न पुग्छु फेरी “के हुन्छ भनेर ? वहाँ भन्नु हुन्छ रात भरी सुत्दैन, अइयाँ अइयाँ भन्छ कहिले खाटमा ठोकिन्छ, कहिले भित्तामा ठोकिन्छ, पिट्यो, मा¥यो भन्छ । हामीले हेर्दा केहि देख्दैनौ । लागो भागो हो कि भनेर झारफुक पनि गरिसके, तर आज ३ दिन भैसक्यो कम भएकै होइन ।
फेरी विरामीलाई सोधे “तपाईलाई कुट्नेले केहि भनेको सुन्नुहुन्छ त ? ला, अझ खा, तलाई छोडदिन जस्ता शब्दहरु भन्छ रे र वक्सीङ हानी राख्छ रे” । विरामी यति धेरै आत्तिएका थिए कि उनलाई निश्चित थियो त्यसले पक्कै मार्छ भन्ने, किन कि तीन रात देखि उसले लगातार पिटी राखेको छ र को हो ? के हो ? भन्ने थाहा समेत छैन । उनी भन्दै थिए अव म त्यो घरमा कहिले पनि जाँदिन, उसले मार्छ मलाई । मलाई यही अस्पतालमै भर्ना गरिदिनुस, वरु म महिनौ यही भर्ना भएर वस्न तयार छु भनी उनी वारम्वार भनी रहेका थिए ।
वहाँको परिक्षण गरें, ब्लड प्रेसर लगाएत सवै कुरा सामान्य थियो । ज्वरो थिएन । वहाँलाई दिनमा भने केहि हुदैन थियो । जे हुन्थ्यो राती मात्र हुने गथ्र्थो ।
मैले थप जानकारी लिने विचार गरे र सोधे “अफिम, गाँजा केहि पिउनु हुन्छ कि हुन्न ? रक्सी पिउनु हुन्छ कि हुन्न ? जवाफ मिल्यो लागु औषधीको प्रयोग गर्दैनन रे तर अलि अलि रक्सि पिउछन रे” ? उनको आमाले भने तुरुन्तै थप्नु भयो कहाँ अलि अलि रक्सि पिउने नि ? एकदमै वढी रक्सि पिउछ ।
उनले रक्सि पिउन लागेको पनि ७ वर्ष भइ सकेछ दिन दिनै रक्सि पिउँछन रे, थोरै रक्सिले छुदै छुन्न रे कहिले काही विहान देखि पनि पिउछन रे । रक्सि पिय पछि घरमा रडाको मच्चाउछन रे । एक ठाउँमा काम ग¥यो छोड्यो, अर्को ठाउँमा काम ग¥यो छोड्यो भैरहेको छ रे । ३ महिना देखि काम नपाएर त्यसै हल्लिएका छन रे । मैले तपाइका सवै लक्षणहरु अत्यधिक रक्सि पिएका कारण हुन । यो रोग निको पार्न त सकिन्छ, तर तपाईले रक्सि पिउन छाड्नु हुन्छ भने मात्र । रक्सिले तपाईको मश्तिस्कमा असर पारी सकेकाले रक्सि नछोडे यो निको पार्न सकिन्न । निको भएपछि फेरी पिउन सुरु गर्नु भयो भने तुरुन्तै वल्झिन्छ भन्ने सुझाव दिए । विरामी यति धेरै आत्तिनु भएको थियो की अव कहिले पनि पिउदिन भन्नु भयो र मैले हालसालै वहाँलाई फलोअपमा जाँच गर्दा सम्म पिउनु भएको थिएन । मनमा अठोट हुने हो भने रक्सि, चुरोट वा लागु पदार्थ छोड्न कठिन छैन भन्ने पनि यसले देखाउछ
अदृष्य शक्तिले कुटपिट गर्ने र गाली गर्ने, हप्काउने, डराउन दिने जस्ता समस्याहरु प्राय मानसिक असन्तुलन हुँदा हुन्छन। उनलाई कसैले गाली गरेको र वक्सिङ हानेको दुवै भ्रम रहेछन । शायद पाठक वर्गलाई विश्वास गर्न कठिन भयो होला ”गाली गरेको भ्रम त ल मानौ, पिटेको, वक्सिङ हानेको र अझ अनुहारमा निलडाम पनि कहि भ्रम हुन सक्छ ? भन्नु होला । मेरो मनमा पनि यो प्रश्न त उठेकै हो निलडाम किन भयो, कसरी भयो भन्ने र अझ प्रश्नहरु सोधे र गहिरिएर जान्ने प्रयास गरे ।
कुनै अदृष्य शक्तिले विरामीको दाहीने हातको मुठी पार्दिने रहेछ र उनकै हात द्धारा उनकै पिटाई गर्दो रहेछ । कस्तो अचम्म । आफैले आफैलाई मुक्का वर्साउन पनि रोक्न नसक्ने । तर अद्धष्य शक्तिको अगाडी वहाँको केही लागेन छ । फेरी राती मात्रै किन त ? हुने भए दिउसमा पनि हुनु पर्ने । यस्तो खाले समस्या प्राय राती, अध्यारोमा, वत्ति नभएको वेलामा, सुनसान अवस्थामा वढी हुन्छ । यसको वारेमा हामी एकछिन पछि कुरा गरौला ।
अत्यधिक रक्सि पिउदा र रक्सिको लत लागे पछि मानसिक असन्तुलन हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यो विमारीले प्रष्ठ पार्छ । रक्सिको लत लागेकाहरुमा धेरै खाले शारीरिक र मानसिक समस्याहरु हुन्छन जसमध्ये यो एउटा समस्या हो । यस्तो समस्यालाई (Alcoholic Psychosis) अर्थात मदिरा सेवनका कारण भएको मानसिक असन्तुलन भनिन्छ । मदिरा सेवनका कारण मश्तिस्कमा असर परेर यस्तो भएको हो ।
यो रोगका मुख्य लक्षणहरुमा एउटा हो (Alcoholic Hallucinosis) अर्थात हुदै नभएको वा अरु कसैले नसुन्ने आवाजहरु वा कुराहरु सुनिने । यस्ता आवाजहरु जुन विरामीले मात्र सुन्छन, प्राय गाली गर्ने, वेइजती गर्ने, डराउन दिने, पिट्छु मार्छु भन्ने खालका हुन्छन । कति मदिराको लत लागेकाहरु यस्तो हुँदा भाग्ने गर्छन र लडेर चोटपटक समेत लाग्न सक्छ ।
यसको अर्को लक्षण हो (Alcoholic jelousy) अर्थात आफ्नो श्रीमती वा श्रीमान अरुसंग लागेको छ भन्ने विश्वास गर्ने । यो पनि खतरनाक लक्षण हो । यसैका कारण कुटपिट हुने र हत्या सम्म हुने खतरा हुन्छ । यहाँ उदाहरण दिइएका विरामीको अलि वेग्लै प्रश्तुती थियो । उनलाई (Alcoholic Psychosis) को उपचार गरे पछि लक्षणहरु एक हप्ता भित्र नै कम हुदै गए र उनी आफ्नै घरमा वस्न सक्ने अवस्थामा पुगे । उनको अनुहारमा लागेका निलडामहरु आफ्नै मुक्काले हान्दा र खाटमा र भित्तामा अनुहार ठोक्किदा भएका रहेछन । हुनत उनले भयंकर, डरलाग्दो अनुहार भएको मान्छेले हान्छ भनेका थिए, त्यसवारे राम्रो संग विवरण दिन भने सकेनन । Alcoholic Psychosis मा दृष्टि भ्रम अर्थात हुदै नभएको आकार जस्तै मान्छे, जनावर, सर्प, विच्छी, वाघ आदी देख्न पनि सकिन्छ जुन अरु कसैले देख्दैनन । यी विरामीले भने डरलाग्दो अनुहार जस्तो मात्र भनेका थिए ।
यसमा याद राख्नु पर्ने कुरा के लाग्छ भने मदिरापानले मानसिक असन्तुलन गर्न सक्छ त्यसकारण सकभर मदिरा नपिउनु वेश । होइन कहिले काही त मदिरा पिउनु पर्छ, रमाइलो गर्नु पर्छ भन्ने विचार छ भने अत्याधिक मदिरापान कहिले पनि नगर्ने र लत लाग्ने गरी मदिरा नपिउनु राम्रो हुन्छ । कथम कदाचित मदिरा पिउने मानिसलाई मानसिक असन्तुलन जस्तो लक्षणहरु देखिएमा झारफूक गर्न नथाली उपचार गराउनु पर्छ ।